Hadaba xikmaddaas waxaa laga qaadan karaa in qofka haddii uusan lahayn adkaysi uu u adkaysto caqabadaha uu kala kulmo iimaankiisa, in markaas waxa uu sheeganayo in uu aaminsan yahay uusan ka run sheegayn, maxaa yeelay, haddii waxa uu aaminsan yahay uu ku kalsoonyahay Nafsiyan, markaas qofkaas wuxuu diyaar u noqon lahaa in uu wajaho wax walba, haba noqoto waxaas wax uu naftiisa ku waayo.
Hubaal marka aad saxantahay ogtahayna in aad Xaq ku taagan tahay, in dhimashada ama waayidda naftaada aad waayso aysan micna saas ah kuugu fadhin, sharaftana ay ku jirto difaacidda waxa aad tahay oo la mid ah wax aad aaminsantahay.
Hadaba waxaa jirta Oraah kale oo oronaysa qofku waa waxa uu aaminsan yahay, marka haddii aadan u dhiman karayn ama meesha ugu dambaysa nolosha aadan la gaari karayn, waxa aad tahay markaas, waxaa shaki ku jira waxa aad sheeganayso in aad tahay dhab ahaantooda ama aad aaminsantahay.
Wixi tagay waa tageen ayay dhahdaa Soomaalida, waana runtood ayaa la oran karaa, maxaa yeelay wax tagay kuuma soo laaban karaan, waana in aad la noolaataa xaqiiqda ah in shalay aysan kuu imaanayn, balse, bari ay kuu imaan doonto maantana aad taagantahay.
HADDII DUNIDA HORE AHAYD
Haddii dunidii hore ahayd duni qabiilaysan oo dadku ay isku laayaan Qabyaalad, waxna ay ku qaybsan jireen hab qabyaaladeeda, lana aaminsanaa in lagu kala sareeyo Nolosha, oo Nin ku dhashay sagaal bilood uu aaminsanaa in uu ka sareeyo nin kale oo ku dhashay intiisa oo kale, lagana yaabo in uu ka wax tar iyo taya badan yahay, maanta dunida aan ku nool nahay waxaas kama shaqeeyaan oo kan Cuuryaanka ah ee Cilmiga iyo Xikmadda Alle ku beeray in la dhagaysto ayay maraysaa.
Marka adiga Soomaaliga ah, maxaa kugu kalifay in aad ku noolaato Taariikhda Dad waa hore lafahooda Ciidda ay cuntay, miyaadan Xaq u lahayn in aad wajahdo dunida aad hadda ku nooshahay dadka ku noolse aad wax la qaybsato, adiga oo wax ka eegay dhanka anfacaaddaada.
Maskaxda Computerka wixii lagu shubo ayay keedisaa, wax tarna waa u leeyahay computerka dunida iyo waxa ku noolba, hadaba adiga oo ah kan computerka sameeyay, amarkana siiya, waxna ku kaydsada ama ka shuba, maxaa kuu diidaya in sidaas si la mid ah aad maskaxadaada u isticmaasho? si maslaxaddaada iyo tan dunidaba aad wax tar ugu yeelato.
Inta badan ee aad ku dadaasho wax wadaagidda, waa inta badan ay noloshaada ay marti galiso Dad badan ama Duni badan oo wax kula wadaagto, sidaa darteed wadaaga wuxuu kaa dhiga qof ka wayn sida uu u muuqdo, in mar walba dadka aad wax la wadaagto waxaa ku bata iimaankaaga, waxaa ku kordha aqoontaada, inta badan ee aad aamustaa waa inta badan aad ka indha xirantahay xikmaddaha iyo dheef badan oo dhinacyo kala duwan leh, hadaba ku dadaal in inta aad haysato ama aad taqaano aad la wadaagtid dadka aad ku kalsooni badan tahay, adiga oo ka fogaanaya Cabsi iyo Xishood.